Heerkulka sare ee Shiinaha wuxuu ku fiday perlite iibka Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
Fidinta la ballaariyay waa nooc ka mid ah maaddada granular cad oo leh qaab -dhismeedka malabka gudaha, kaas oo lagu sameeyo preheating ore perlite ore ka dibna la dubay laguna ballaariyay heerkul sare oo degdeg ah. Mabda'a shaqada ee perlite Balaariyay waa: macdanta perlite waa la jajabiyaa si ay u samaysato ciid macdan ah oo cabbir go'an leh, ka dib kulaylkii hore, kuleyl degdeg ah (ka sarreeya 1000 ℃), biyaha macdanta ayaa uumi baxa oo ku fida gudaha macdanta macdanta jilicsan ee jilicsan qaab-dhismeedka iyo ballaarinta mugga 10-30 jeer alaabooyinka macdanta aan macdanta ahayn. Perlite wuxuu u qaybsan yahay saddex qaab iyadoo loo eegayo tikniyoolajiyadda ballaarinta iyo adeegsiga: unug furan, unug xiran, iyo buufin.
Hordhaca perlite balaariyay
Fidinta la ballaariyay waa nooc ka mid ah maaddada granular cad oo leh qaab -dhismeedka malabka gudaha, kaas oo lagu sameeyo preheating ore perlite ore ka dibna la dubay laguna ballaariyay heerkul sare oo degdeg ah. Mabda'a shaqada ee perlite Ballaadhka ah waa: macdanta perlite waa la jajabiyaa si ay u samaysato ciid macdan oo cabbir go'an leh, ka dib kulaylkii hore, kulayl degdeg ah (ka sarreeya 1000℃), biyaha ku jira macdanta ayaa uumi baxa oo ku fida gudaha macdanta macdanta jilicsan si ay u sameeyaan qaab-dhismeed dalool iyo ballaarinta mugga 10-30 jeer waxyaabaha macdanta aan macdanta ahayn. Perlite wuxuu u qaybsan yahay saddex qaab iyadoo loo eegayo tikniyoolajiyadda ballaarinta iyo adeegsiga: unug furan, unug xiran, iyo buufin.
Codsiga perlite balaariyay
Perlite la ballaariyay waa maado macdan aan dabiici ahayn oo leh adeegsi aad u ballaaran. Ballaarinta la ballaariyey waa ka-hortagga dabka, ka-hortagga kuleylka, dhawaaq-nuugista iyo dahaaridda dhawaaqa, miisaanka fudud iyo guryaha xoogga badan ayaa ku lug leh dhammaan beeraha. Tusaale:
1.Jinjiye oksijiin, kaydin qabow, oksijiin dareere ah iyo gaadiid nitrogen ah oo dareere ah ayaa loo adeegsadaa buuxinta qalabka dahaarka kaamerada.
2.Waxa loo adeegsadaa sifeynta aalkolada, saliidda, daawada, cuntada, bullaacadaha iyo waxyaabaha kale.
3.Waxa lagu isticmaalay caag, rinji, dardar, balaastiig, iyo buuxiyayaal iyo fidiyayaal kale.
4.Used for steelmaking and slag removal, dahaarka birta dhalaashay iyo daboolida. Buuxi tayo sare leh oo loogu talagalay suufka bareega baabuurka.
5.Waxaa loo isticmaalaa in lagu nuugo saliidda sabaynaysa, wakiilka iftiiminta dheef-shiid kiimikaad ee saliidda, iyo cufnaanta sibidhka oo cufan.
6.Waxa loo adeegsadaa beeraha, beerista, horumarinta carrada, biyaha iyo ilaalinta bacriminta.
7.Waxaa loo adeegsaday in lala kaashado dhejisyada kala duwan si loo sameeyo astaamo qeexitaanno iyo bandhigyo kala duwan.
8.Waxa loo adeegsadaa daboolidda dabka, nuugista dhawaaqa iyo dahaarka dhawaaqa ee weelasha warshadaha iyo dhismayaasha.
Tilmaamaha perlite balaariyay
Cabbirka: 0-0.5mm, 0.5-1mm, 1-2mm, 2-4mm, 4-8mm, 8-30mm.
Cufnaanta dabacsan: 40-100kg/m3, 100-200 kg/m3, 200-300 kg/m3.
Perlite -ka la ballaariyay waa la farsameyn karaa oo la soo saari karaa iyadoo la raacayo tilmaamayaasha dalabka ee macaamilka.
Hore: jumlada Cufan ee Perlite ee Madaafiicda Daboolista Kulka
Xiga: u iibso Beeraha Beeraha badan ee beeraleyda ganacsiga
macdanta zeolite dabiiciga ah ee Daaweynta Biyaha ma ...
tayo sare leh maalin walba Bililliant fidiyey perlite f ...
macdanta perlite ee warshadaha ee soo saarayaasha macdanta